ဗမာပြည်မှာဆရာဝန်လာဖြစ်တာကံကောင်းတာပဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဗမာပြည်မှာဆရာဝန်လာဖြစ်တာကံကောင်းတာပဲ
Posted by Foreign Resident on Aug 22, 2011 in Community & Society | 20 comments
This is only “part” of one article, written by Dr. Chan Aye ( From Face Book ).
It is interesting & touching real story.
the real differences between Doctors’ lives in Myanmar & Foreign.
Please, feel it yourself.
Bravo, Sayar Chan Aye !!!
If you want to read the full article, please read it in
သြော် ငါ ဗမာပြည်မှာဆရာဝန်လာဖြစ်တာကံကောင်းတာပဲ
ဧည့်သည်တွေကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး ခွင့်တောင်းတော့မာဂရက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူလဲလိုက်မယ်တဲ့၊ သူဆရာဝန်ပါတဲ့။
လူနာက အသက်(၃၀)၊ ကလေး(၄)ယောက်အမေ၊ အငယ်ဆုံးကလေးက(၁၀)ရက်သားပဲရှိသေးတယ်။
မီးနေသယ်ပေါ့ဗျာ။ အရမ်းဖျား၊ ကိုယ်ဖေါယောင်၊ သွေးတွေလဲဆင်းတယ်တဲ့။
စမ်းကြည့်တော့သွေးပေါင်ချိန်(၆၀/၀)၊ နှလုံးခုန်နှုန်းက (၁၂၀)လောက်ရှိမယ်၊ ကိုယ်ပူချိန်(၁၀၄)၊ အောက်ကသွေးတွေကတော့ဒလဟောပဲ။ အသက်ရှုတွေလဲမြန်နေပြီးမောနေတယ်။
လာပါတယ်ဆရာ၊၊ ဆရာတို့ရောက်တယ်ကြားကြားခြင်းလာတာပါ၊၊ ဆရာတို့ကအလုပ်စခန်းထွက်သွားပြီ။
နေ့ခင်းတုန်းကလဲတစ်ခေါက်လာသေးတယ်။ ဆရာတို့ထမင်းစားနေလို့။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတော့လဲဆရာအိပ်နေတာနဲ့။
အချင်းလဲကျတယ်။ စုံလဲစုံတယ်။ လုပ်စားလာတာအိုသေတော့မယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုရှိတယ်။ အချင်းကျန်တာလား။ လက်သည်ကြီးကတော့မကျန်ဘူးပြောတာပဲ။
သူကအထူးကုဆိုတော့ကိုယ့်ထက်ဝါရော အသက်ရော ကြီးလို့သူ့အကြံတောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့်၊ သွားရမယ့်ခရီးနဲ့(နှစ်နာရီလမ်းလျှောက်၊ သုံးနာရီကားစီး)
ချက်ချင်းသွေးအုပ်စုခွဲ၊ သွေးရှာပြီးသွင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားနေတုန်း သားဖွားမီးယပ်ဆရာကြီးသတင်းပို့၊
ကျွန်တော်က၊ ကျွန်တော်မပါလဲမာဂရက်ရှိသားဘဲ၊ မာဂရက်လုပ်ပေးလို့ရတာပဲလို့ပြောတော့၊
ငါသာမင်းနေရာမှာဆိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ ငါကသမားတော်၊ ဒါတွေမလုပ်တတ်ဘူး။
“ လုပ်တတ်လဲမလုပ်ပေးဘူး ” တဲ့။
ဆေးအဖြေတွေစောင့်ရနဲ့ “ ကုသမှုနှောင့်နေးတာတွေ ” တောင်ဖြစ်တယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့်အဲဒီကံကောင်းမှုက အခုထိရောရှိသေးရဲ့လား ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။
ခဏနေမှလှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ် နဲ့ပြန်လာတယ်။
Bravo Dr. Chan Aye !!!
မြန်မာပြည်မှာတော့ ပိုက်ဆံမပေးနိုင်တဲ့လူနာဆိုရင် ဆေးမကုဘူး၊ သေ သေ ဆိုပြီးပစ်ထားတဲ့ ဆရာဝန်မျိုးကို အရင်နှိပ်ကွပ်သင့်တာဗျ။
အဲ့လိုလူတွေ ရှိတော့ ရှိပါတယ် … ။အကုန်လုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ….. ။ ဒါပေမဲ့လည်း အများစုကအသက်ကယ်နေရတဲ့ အလုပ်မို့လို့ … ကိုယ်တိုင်မဟုတ်လျှင်တောင် ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ စိတ်တော့ ရှိကြစမြဲပါပဲ … ။
လူနာ အသက်လုနေရတဲ့အချိန် ဘေးကလူကြည့်လျှင်တောင် ကြက်သီးမွှေးညှင်းထတယ် … ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်း မှန်ကန်နေဖို့ကလည်း လိုတယ် … စက္ကန့်နှင့်အမျှ အရေးကြီးနေတဲ့ အချိန် … လူနာရဲ့ ကံနဲ့ .. .ဆရာဝန်ရဲ့ စေတနာ ထားမှူပေါ်မူတည်ပြီး … ရလဒ်ထွက်လာတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးလေး … ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ် … ။ ကြည့်ရတဲ့လူတောင် ရင်တမမနဲ့ … ၀မ်းနည်းလာသလိုလို …စို့နင့်လာသလိုလိုနဲ့ … နောက်ဆုံး လူ့အသက်ကယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန် သက်ပြင်းချမိတော့မှ ….. မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ ပျော်ရွှင် ရတော့တယ် … ။ ၀မ်းသာလွန်းလို့ ကျတဲ့ မျက်ရည်ဆိုတာလည်း တကြိမ်တစ်ခါပဲ ကြုံခဲ့ဖူးတယ် .. ။ အဲ့ဒီအကြောင်းလေး … ပို့စ်ရေးမလို့ … တချို့ပါဆယ်နယ်တွေပါတာနဲ့ .. မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး … ။
ဟုတ်ကဲ့ ရေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ အသပြာဆရာဝန်များ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို မှန်ကန်စွာအသုံးချချင်လာမလားလို့ပါ။ (ဂေဇက်မှတဆင့် တတ်နိုင်သလောက်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းခြင်းပေါ့။)
မရေးတော့ပါဘူး Shwe Ei ရေ … အဲ့ဒီ အဖြစ်ပျက်မျိုး စာပြန်ရေးလျှင် တခါပြန်ခံစားရတဲ့ .. ၀မ်းနည်းဝမ်းသာခံစားမှူကြီး …မတွေးချင်တော့လို့ …. ။ အားရကျေနပ်စရာကောင်းပေမဲ့… စိတ်ခံစားမှူ အပိုင်းကျတော့ … ဘေးလူကကြည့်ရင်း နှလုံးပါအောင့်တယ် … ။
ဆရာဝန်မပြောနဲ့ … သာမန်ပြည်သူတယောက်တောင် အရေးပေါ် ကယ်တင်မှူမျိုးတွေ့ရလျှင် ဘာလေး ကူညီလို့ရမလဲ ၀ိုင်းတွေးပေးကြတာ … ။ အသပြာဆရာဝန်ဆိုတာ … တကယ်တမ်း နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ လူ့အသက်မကယ်ဖူးတဲ့ လူမျိုး ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်နော် … ။
ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာတစ်ခုကို ပိုက်ဆံရဖို့ တစ်ခုထဲအတွက်နဲ့ ပဲ အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုလျှင် … လူဖြစ်ရကျိုးမနပ်လိုက်တာနော် …။
တချို့ဆရာဝန်တွေ ပြောကြတယ် …လူနာက အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပြုံးပျော်ပြီး ထွက်သွားတဲ့ ကျောပြင်ကိုကြည့်ရင်း နောက်နေ့တနေ့တွက် အားအင်ဖြစ်ပါသတဲ့လေ … ။
ဇီဝိတဒါနမို့ တကယ့်ဆရာဝန်များ နောင်ဘ၀အသက်ရှည်ကြမှာပါ
ဆရာဝန်စစ်စစ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓါတ်ကို ဦးညွှတ်ပါတယ်။ အမေများကိုလဲရှိခိုးပါသည် ။
အဲ့ဒါကတော့ သဂျီးရေ.. နိုင်ငံရဲ့ သဘော သဘာဝအရ ကွာတာကိုး… တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆရာဝန်လစာနဲ့.. ဒီက အစိုးရပေးတဲ့ တရားဝင်ဆရာဝန်လစာ …. ဆီနဲ့ ရေ ၊ နံသာဆီနဲ့ အီးလိုပဲ ကွာတယ်လေ …. ။(ဒါတောင် သင်ကြားရတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းခြင်း တက်တက်စင်အောင် ကွာခြားတာမဟုတ်ဘူးနော် … ဒီကလူတွေ တခြား ထွက်အလုပ်လုပ်လည်း … ၀င်ဆံ့ကြတယ် … ) ။ အစိုးရ လစာပေးတာ တစ်လစာ ကလေး မုန့်ဖိုးလောက်မရှိတာမို့ …. အပြင် ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းတွေမှာ အားတဲ့ အချိန် ၀င်ထိုင်ကြပြန်ရော …. ။ ဒီကြားထဲ ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းလေးလည်း အလျှင် မှီအောင်ထိုင်နိုင်မှ တစ်လ တစ်လ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေမျှမှာ … ။ ဒါက ဒီနိုင်ငံမှာ ။
တခြားနိုင်ငံကတော့ … ဆရာဝန်တယောက်ဆိုလျှင် အကျိုးခံစားခွင့်ရော၊ လစာပါ ..ဒီမှာထက် အပြတ်သတ်သာမှာပါ … ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရတာက သူဌေးဖြစ်၊ ခွေးဖြစ်ပေါ့ သဂျီးရယ် (အီး … ကန်တော့ .. ကန်တော့ … စကားပုံပေါ်လွင်အောင် နှိုင်းရတာပါ ဆရာ၊ဆရာမတို့ရယ် … ဒါမှ ဟိုလူဂျီး သဘောပေါက်မှာ အဟီး … ) … သူ့အိုးနဲ့ သူ့ဆန် တန်ယုံလို့ ဆိုရမယ်ထင်တယ် … ကြေးကြီးကြီးပေးရတဲ့အတွက် … တရားစွဲတာတွေ ၊ လျှော်ကြေးတောင်းတာတွေ … ရှိလာတာဖြစ်မယ်…။ စေတနာထက် ငွေကြေးကို တန်ဖိုးထားတာကြောင့်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်
It was happened in Myanmar.
They ( doctors ) need to get insurance,
even after they retired.
( at least, another 10 years after they retired )
Specialists are the worst.
Because, patients may/can sue 5/10 years after their treatments.
Whatapity doctor’s life in foreign.
ဆရာဝန် ဘက်ကကြည့်ရင်..သူ့ ဆီလာသမျှလူတွေ က..ရုံ့ မဲ့ နေတာဘဲ…
မင်းသား သာ..ဆိုသူ့ ကြည့်တဲ့ သူတိုင်းကပြုံးပျော်နေမှာဘဲ လေ…..
မဲ့ သူလာတော့မဲ့ သူ ကိုမြင်တော့လည်း..ကိုယ်ကမဲ့ ချင်တယ်
ပြုံးနေတဲ့ သူကြည့်တော့လည်းကိုယ်လည်းပြုံး ရတယ်ပေါ့….
( နှလုံးလှဆရာဝန် ဒေါက်တာနော်မန်ဘက်သွန် ) ဆိုတဲ့စာအုပ်လေး
ရှိပါတယ် ရှာဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ကိုယ်ကျိုးစွန့်နိုင်လွန်းတဲ့ဆရာဝန်တွေပါ။။
thithi lay says:
ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ ထဲကလို ဆရာဝန်တွေ အပြင်မှာ တကယ်ရှိတာ ပျော်စရာကြီးနော်
တွေ့ဖူးတယ် အဲ့ဒီလို ဆရာဝန်မျိုး မန်းလေးဆေးရုံ ကလေးဆောင်မှာ အိမ်က ညီမ အငယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်လို့ ဆေးရုံတက်တုန်းက (ကြာတော့ ကြာပါပြီ) (အဲ့ဒီအချိန် ဆေးရုံမှာ သွေးလွန် တုပ်ကွေးရာသီမို့ ကလေးတွေ အပြည့်အသိပ်ပါ )
လောကမှာ လူတန်းစားမရွေး ကောင်းသူရှိသလို ဆိုးသူလဲရှိနိုင်ပါတယ်။
ငွေမက်သူ ရှိနိုင်သလို ငွေမမက်သူတွေလဲတပုံကြီးရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် တရားစွဲမယ် ပြုမယ်ဆိုတာမျုိးက ရှားပါတယ်။
နောက်ဆရာဝန်ဆိုရင် အသက်ကယ်သူတွေ အသက်သခင်တွေလိုကျေးဇူးတင်ကြတာလဲအမှန်ပါဘဲ။
အဲတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်ဖြစ်ရတာ ၀င်ငွေကောင်းမကောင်းတော့ မသိဘူး
နိုင်ငံခြားလိုတရားအစွဲမခံရတာတော့ ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အသက်တချောင်းတော့ ကယ်ကောင်းပါတယ်။ တခါတလေ မှာတော့ လဲ မမှားသောရှေ့ နေ မသေသော ဆေးသမားရယ်လို့ တော့ရှိသေးတော့ လဲ။အပြစ်ပေါ်လိုက်ပြီး ခွင့်လွှတ်သည်းခံတတ်တဲ့နေရာ မြန်မာလူမျိုးကို ဘယ်သူမှမမီနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ပါ။တဆက်ထဲ သွားသတိရတာက မီးတွင်းထဲက အမေကိုပါ။ကျေးဇူးအခါခါပါ စာရေးသူ ကိုဖောရိမ်းရေ—
“ခွင့်လွှတ်သည်းခံတတ်တဲ့နေရာ မြန်မာလူမျိုးကို ဘယ်သူမှမမီနိုင်”
Because, we don’t have enough regulation to sue back.
Wait & see lar.
Human are Human lar.
ကောင်းပဗျာ ဒီလိုကျပြန်တော့လည်း မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်တွေကို ကျွန်တော်ချီးကျူးမိပါတယ်။
ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ လိင်တံဖြတ်ပြီး. အသက်ကယ်ပေးလိုက်တဲ့… ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို.. အဖြတ်ခံရသူက.. လုပ်ငန်းဆောင်တာ မဆောင်ရွက်နိုင်တော့လို့.. တရားစွဲတဲ့သတင်း..။
A truck driver in Kentucky whose penis was amputated during an operation is suing the surgeon, claiming it was done without his consent.
Phillip Seaton says his penis was removed during what was supposed to have beenacircumcision to treat inflammation four years ago.
Dr John Patterson says he amputated because he found life-threatening cancer during the operation.
The Seatons have already sued Jewish Hospital, where the surgery took place.
The facility settled out of court for an undisclosed amount.
‘Loss of service’
Mr Seaton and his wife, Deborah, are suing Dr Patterson for damages.
“Mr Seaton is here today, able to be in this courtroom… because John Patterson saved his life,” Mr Robinson said.
Mr Seaton and his wife are seeking unspecified damages for “loss of service, love and affection”.
Penile cancer is rare, with only 1,360 new cases and 320 deaths estimated in the US in 2011, according to the National Institutes of Health.
အသိဆရာဝန်တစ်ယောက် မြန်မာပြည်သားဆိုတော့ မြန်မာစိတ်ဓာတ်နဲ့ လူနာအဖိုးကြီးကို ကုတင်ပေါ်တက်ရတာခက်မှာစိုးလို့ ခွေးခြေလေး ခုပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလူနာက ခွေးခြေကနေ ချော်လဲပြီး နာသွားလို့ ဆရာဝန်ကို တရားစွဲတယ်။ လျှော်ကြေးပေးလိုက်ရလို့ နောင် စေတနာပိုတဲ့အလုပ် ဘာမှ မလုပ်တော့ဘူးတဲ့လေ။
တင်ပေးတဲ့ FR ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းလို စေတနာ ဆရာဝန်တွေလည်း အများကြီးပါ။ သူ့အတွက်ကတော့ ဓားသွားထက်က ပျားရည်စက်လေးတွေကို အချိုမြိန်ဆုံး သုံးဆောင်လိုက်ရတာပါပဲ။